सर्वोच्चको संसद पुनर्स्थापनाको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्पहरु Nepalpatra सर्वोच्चको संसद पुनर्स्थापनाको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्पहरु
अव के गर्लान प्रधानमन्त्री ओलीले ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हिजो मंगलबार संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी फैसलागर्दै १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनेको छ । लामो समयको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद पुनर्स्थापना भएसँगै अव के गर्लान प्रधानमन्त्री ओलीले ? भन्ने चासो बढेको छ ।
थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विवादास्पद भन्दै यसले राजनीतिक समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । उनले फैसलापछि बरु अस्थिरता बढ्ने दावी समेत गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि भन्ने अड्कलवाजी भइरहेका बेला उनले सहजै राजीनामा नगर्ने भएका हुन् । सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै प्रचण्डले ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि थापाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्पहरु
सर्वोच्चको फैसलासंगै प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अब नैतिक संकट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि उनीमाथि नैतिक संकट परेको हो । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा ओलीसँग अझै केहि विकल्पहरु बाँकी छन् ।
विकल्प १ : नैतिकताका आधारमा राजीनामा
विकल्प २ : संसदको सामना गर्ने
विकल्प ३ : बहुमत जोगाउने
विकल्प ४ : आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने
विकल्प ५ : गल्ती महसुस गरेर पार्टी विभाजन हुन नदिने
विकल्प ६ : प्रधानमन्त्री छोड्न आलटाल
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्को विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री छोड्न आलटाल गर्नु हो । विगतमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला राम्चान्द्रपौदेल जस्तो कसैले वहुमत पुर्याउन नसकेमा प्रधानमन्त्री बन्ने समय लम्बिन पनि सक्छ । यदि निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिएको छैन । यदि ओलीलाई नै नेकपाको आधिकारिक मान्यता दिएमा प्रचण्ड-नेपाल समूह सडकमा जान्छ, आन्दोलन हुनसक्छ ।
विकल्प ७ : संकटकालको घोषणा